Top 8 Free Online Photo si Tools Kartuunka in Cartoonize Your Photos
> Resource > Talooyin > Best 8 Online Photo si Kartuunka Converter in Cartoonize Photos
Best 8 Online Photo si Kartuunka Converter in Cartoonize Photos
Ma waxaad u malaysay Nabiyow ku saabsan samaynta cartoon ah oo naftaada ah naftaada u matalaya ee profiles online? Oo wakhtigii jir ah, dadka loo isticmaalaa in lagu sawiri cartoon ah. Haddaba horumarinta tiknoolajiyada, waxaa aad u sahlan in aad la abuuro sawir ka sawiradaada. Waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa a photo in Converter cartoon . Just diyaariyo photos digital, sawirka si cartoon qalab diinta ka hesho iyo ka dhigi cartoon ah oo dhowr qasabno!
Dhab ahaantii, waxaa jira qalab badan oo lacag la'aan ah kaa caawin kara inaad cartoonize sawiradaada . Qaar ka mid ah waxaa lagu soo bixi software iyo qaar ka mid ah waa qalab online. Halkan ugu fiican 8 sawir online si xor ah u goobaha cartoon ku qoran yihiin. Waxaad ka qaadan kartaa mid ka mid ah si ay u geliyaan sanamyadiinna oo loo abuuro dabeecad cartoon ah oo aad u lacag la'aan ah ama aad avatar ah oo aad hal-abuurka.
Websites Free si loogu badalo in ay sawiro sawir
Photo goobta cartoon 1> sawirka Kan sameeyey sawirrada : Tani waxay sawir si xor ah u qalab cartoon aad u saamaxaaya in ay aad cartoon u gaar ah si xor ah. Marka aad abuuray qof cartoon ama avatar aad, kaliya aad u riixi kartaa icon aad iyo dooran "Save Picture Sida ..." ka menu inuu ku badbaadiyo kuwo aad cartoon u gaar ah.
Photo in cartoon goobta 2> BeFunky : BeFunky kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan sawir ka photos digital. Just furo BeFunky iyo geliyaan sawirkaagu in. BeFunky ay abuuri doonaan sawir si toos ah aad u. Aqoon farsamo No waxaa u baahan tahay, kaliya waa si fudud! Qaabab sawir Popular sida jpeg, GIF iyo PNG waxaa taageera. Haddii aad sawiro ku kaydsan yihiin goobaha la wadaago sawir internetka, waxa kale oo aad ku qor karaa URL ah, iyo BeFunky heli doontaa sawirada sida ay URL idin ​​siiyo.
Photo goobta cartoon 3> Kuso Kartuunka : Kuso Kartuunka waa sawir free online in Converter cartoon in aad si fudud oo dhakhso ah loogu badalo sawiro aad u sawir. Badan Hababka iyo midabkiinaba, waxaa la siiyaa Doorashadaada.
Photo in cartoon goobta 4> Yahoo! Avatars : Waxaa loo arkaa sida adeegyada ugu caansan si ay u abuuraan avatars online. Sidaa daraadeed, waxaad si fudud u heli karaan avatar la hadal aad jeceshahay iyo dharka.
Photo goobta cartoon 5> South Parker Studio : South Parker Studio bixiyo noocyo kala duwan oo badan oo characters, laga bilaabo dadka waaweyn in ay xanaanada caruurta. Waxa kale oo aad si xor ah u dooran kartaa qaabka, maqaarka, dharka, iwm jilayaasha. Marka aad ku dhameysatay kaalinta samaynta avatar ah, waxa aad la wadaagi karto on Facebook.
Photo goobta cartoon 6> Fake Your Manga : Waxaad kordhin kartaa hal-abuurka halkan tan aad bilaabi kartaa ka xoq si ay u sameeyaan cartoon ah. Wajiyada, indhaha, sanka, afka, dhegaha, dharka, iwm oo dhan la xornimo ah u dooranaya karo. Waxaad kala soo bixi kartaa avatar si aad disk maxalliga ah iyo u isticmaalaan on your live Rasuul, Skype, facebook iwm
Photo in cartoon goobta 7> Zwinky : Zwinky shaqeyn kartaa iyada oo toolbar Explorer Internet ah oo si fiican ula shaqeeya sawirrada asalka cad. Waxay bixisaa badan oo dhar iyo qalab samaynta characters caadadii. Just isticmaasho hal-abuur loo sameeyo avatar weyn.
Photo goobta cartoon 8> Meez : Meez waa bulsho-internet bulshada la magac adduunka, avatars oo kulan la isku daro. On Meez, aad si xor ah shakhsiyeeyo kara cidda aad la kartoonada. Sidoo kale waa meel wanaagsan in ay ku xidhmaan saaxiibada iyo files share warbaahinta.
By jidkii, haddii aad leedahay sawiro badan oo dhow dahay, waxa kale oo aad ka dhigi kartaa sawirka filinka show qaar ka mid ah software sameynta filimada loo ilaalin iyo wadaagaan xasuusta sawir aad si ka fiican.
Top 10 Free QuickTime Movie Editors